पीसीको लागि DU रेकर्डर, म्याक र विन्डोज डाउनलोड
जनवरी 3, 2021 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
1 पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागि DU रेकर्डर (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
1.1 पीसी विन्डोजको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड गर्नुहोस्7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
1.2 पीसी विन्डोजमा DU रेकर्डर अनुप्रयोगका सुविधाहरू
2 पीसी विन्डोजमा DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
3 पीसीको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागि DU रेकर्डर (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
पीसीको लागि DU रेकर्डर - नमस्कार साथीहरु!! के तपाईं पीसी विन्डोजको लागि DU रेकर्डर अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्न उत्तम तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ 10? त्यसोभए तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ.
यस लेखमा, तपाईं कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पीसीको लागि DU रेकर्डर, ल्यापटप, र डेस्कटप को लागी सित्तैमा.
चरण विधि चरण, मैले डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि व्याख्या गरेको छु पीसी विन्डोज को लागी DU रेकर्डर 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, र विन्डोज 10 (32 बिट - 64 बिट).
अब, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download DU Recorder for PC (विन्डोज 10, 8,7र म्याक) यसलाई जाँच गरौं ...
DU रेकर्डर डाउनलोड पीसी विन्डोज को लागी7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
DU Screen Recorder isarecording application that helps you उच्च-गुणवत्ता भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस् of what is appearing on your smartphone and PC’s screen.
यसमा खेल खेल्ने समावेश हुन सक्छ, रेकर्डि।, प्रत्यक्ष भिडियो च्याटिंग, र सहकर्मीहरु र परिवार संग तपाइँको काम साझा.
यसले तपाईको स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्दा तपाईको स्क्रिनमा देखा पर्ने सबै कुरा रेकर्ड गर्न सक्षम गर्दछ. It also comes with an editing tool that lets you तपाईंको भिडियो सम्पादन गर्नुहोस् after recording them.
डाउनलोड DU रेकर्डर एपीके
अनुप्रयोग पीसीको लागि DU रेकर्डर अनुप्रयोग
अद्यावधिक गरियो7जुलाई 2020
हालको संस्करण 8.0
एन्ड्रोइड आवश्यक छ 4.0 र माथि
द्वारा प्रदान गरिएको DU APPS स्टूडियो
DU रेकर्डर अनुप्रयोग आईओएस र एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध छ त्यसैले तपाईं यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. तल आधिकारिक डाउनलोड लिंकहरू प्राप्त गर्नुहोस्:
Google Play मा DU रेकर्डर
अनुप्रयोग स्टोरमा DU रेकर्डर
पीसी विन्डोजमा DU रेकर्डर अनुप्रयोगका सुविधाहरू
DU रेकर्डर सरल & द्रुत डाउनलोड!
DU रेकर्डर पछिल्लो संस्करण!
भिडियो रेकर्डि .का लागि उत्तम, भिडियो सम्पादन, स्क्रीन क्याप्चरिंग,/प्रत्यक्ष स्ट्रिमि।.
धेरै रिजोलुसनको साथ HD भिडियो समर्थन गर्नुहोस्, बिट दरहरू, र फ्रेम दर.
भिडियोहरू, फेसबुक लाइभ, प्रत्यक्ष कुराकानी, YouTube प्रत्यक्ष रेकर्डिंग सुविधा.
अडियोको साथ कुनै पनि स्क्रीन रेकर्ड गर्नुहोस्.
तपाईं रेकर्ड र आफ्नो रेकर्ड स्क्रीन भिडियो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, बाली, मर्ज र ट्रिम गर्नुहोस्.
वाटरमार्क बिना, You can record video.
स्क्रिन रेकर्ड गर्न रोक्नको लागि, उपकरण हिलाउनुहोस्.
पीसी विन्डोजमा DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
अहिलेको रूपमा, विन्डोज पीसीको लागि त्यहाँ कुनै आधिकारिक अनुप्रयोग वा सफ्टवेयर DU रेकर्डर विकसित गरिएको छैन. The only way to install DU Recorder onaWindows computer is by using an Android emulator.
पीसीमा DU रेकर्डर स्थापना गर्न दुई तरिकाहरू छन्:
ब्लूस्ट्याक्स अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
Bluestacks प्रयोग गरेर पीसीको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि चरणहरू:
कृपया DU रेकर्डरको लागि खोजी गर्नुहोस्.
तपाईं यस DU रेकर्डर अनुप्रयोगको लागि खोजी परिणामहरू देख्नुहुनेछ. स्थापना क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईको गुगल खातामा लग इन गर्नुहोस् ब्लूस्ट्याक्समा गुगल प्लेबाट यो DU रेकर्डर अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न.
DU रेकर्डर अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई तुरून्त प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्.
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् :
अब DU रेकर्डर अनुप्रयोग को लागी खोजी गर्नुहोस्.
तपाइँको Nox इमुलेटरमा DU रेकर्डर अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्
स्थापना पूरा भएपछि, तपाईं आफ्नो पीसीमा DU रेकर्डर अनुप्रयोग चलाउन सक्षम हुनुहुनेछ.
पीसीको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, म आशा गर्छु कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्नेछ विन्डोज र म्याकको लागि DU रेकर्डर अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्. अझै, यदि तपाइँसँग उही सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया दयालु मा साझा टिप्पणी बाकस. थप, तपाईलाई अझ सामान चाहिन्छ, त्यसो भए मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. म तपाईलाई सहयोग गर्न सँधै खुशी छु.
विन्डोजमा पीसीको लागि क्यामस्केनर डाउनलोड गर्नुहोस् 10/8/7
विन्डोजको लागि पीसीको लागि टिक टोक डाउनलोड गर्नुहोस् 10, 8, 7
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: du recorder for pc (Windows 10), du recorder for pc 32 बिट, du recorder for pc download free, du recorder for pc mac and windows download, du recorder for pc windows 7